खबर मञ्च, Author at खबरमञ्च - Page 4291 of 4415 खबरमञ्च
You are here: Home > Articles by खबर मञ्च - Page 4291
By खबर मञ्च / July 18, 2016 / छापामा / Comments Off on हावाबाट बिजुली निकाल्न प्रस्ताव गर्ने कम्पनी बेपत्ता
काठमाण्डौ । हावाबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको प्रस्ताव गर्ने कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको छ। दी गोर्खाज युकेले प्रस्ताव पेस नगरेपछि लगानी बोर्डले निर्णय खारेजीको तयारी गरेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डको ११ माघको बैठकले हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्न तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पेस गर्न दी गोर्खाज युकेलाई […]
कानुनविदले दिए प्रधानमन्त्रीलार्इ सल्लाह-अब तीन विकल्प
By खबर मञ्च / July 18, 2016 / छापामा / Comments Off on कानुनविदले दिए प्रधानमन्त्रीलार्इ सल्लाह-अब तीन विकल्प
काठमाण्डौ । नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक अडचन रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता र कानुन व्यवसायीहरूले तीनवटा विकल्प प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुझाएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ। संविधान संशोधन गर्ने, धारा ३०५ अनुसार राष्ट्रपतिबाट बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी वा राजनीतिक सहमतिमध्ये कुनै विकल्प प्रयोग गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ। संविधानको धारा २९८ अनुसार […]
कराेडाैंको राहत रकम खोइ?
By खबर मञ्च / July 18, 2016 / छापामा / Comments Off on कराेडाैंको राहत रकम खोइ?
काठमाण्डौ । ‘वैशाख १२’ महाभूकम्पको केही घण्टा नबित्दै फ्लोरिडाको टेम्पा सहरकी प्रतिज्ञा तामाङले अर्थ संकलनका लागि ‘गोफन्ड मी’ नामक अनलाइन प्लेटफार्ममा खाता खोलिन्। अभियानको नाम राखियो, ‘भूकम्प पीडितहरूका लागि घर’। सहयोग याचनामा वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा भत्किएका घरहरूका तस्बिर पोस्ट गरियो। तामाङको त्यो सुरुवाती अभियानले धेरैको सहानुभूति पायो। तामाङले सात महिनाकै अवधिमा १ करोड २० लाख […]
By खबर मञ्च / July 18, 2016 / छापामा / Comments Off on सरकारबारे माओवादी मतभेद सतहमा
काठमाण्डौ । नेकपा माअोवादी केन्द्रभित्र कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउने विषयलार्इ लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ। आइतबार लाजिम्पाटमा बसेको हेडक्वार्टर बैठकमा नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षका नेताहरुले सरकार फेरबदलसम्बन्धी निर्णयमा पारदर्शिता नभएको भन्दै असन्तुष्टि राखेका हुन्। श्रेष्ठ पक्षले वैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओली सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिने र कांग्रेससँग मिलेर संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव […]
एकै दिन राज्यकोषको १ करोड ३१ लाख स्वाहा
By खबर मञ्च / July 18, 2016 / छापामा / Comments Off on एकै दिन राज्यकोषको १ करोड ३१ लाख स्वाहा
काठमाण्डौ । सरकारले जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री तथा प्रभावशाली मन्त्रीका आफन्त, नेता तथा पहुँचवालालाई राज्यको ढुकुटीबाट १ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ। मन्त्रिपरिषदको गत असार २४ को बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको प्रस्तावमा ७८ जनालाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको हो। सरकार आफैले बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘विपन्न […]
भूकम्पपीडित बालबालिकाले पुनः सहयोग पाउने
By खबर मञ्च / July 17, 2016 / समाज / Comments Off on भूकम्पपीडित बालबालिकाले पुनः सहयोग पाउने
काठमाडौँ । विसं २०७२ को भूकम्पबाट प्रभावित अत्याधिक जोखिममा परेका बालबालिकाले प्राथमिकताका आधारमा पुनः सहयोग पाउने भएका छन् । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र केन्द्रीय बालकल्याण समितिले बालबालिका वा परिवारको स्थिति सुधारका लागि थप सहयोग गर्ने भएका हुन् । समितिले पहिलो चरण अन्तर्गत भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका अत्याधिक जोखिममा परेका २१ हजार बालबालिकालाई प्रतिव्यक्ति […]